အလုပျသမား အစီအစဥျ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား အလုပျသမား အစီအစဥျ
အပတ်စဉ် အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်
A1 မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ A2 1.	အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ... ■ ...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ A2 1. လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ -------- ■ ...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ..... ■ စွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့ အလုပ်သမားအသိုင်းအ၀န်ြး ဖစ်လာဖို့ လူငယ်အလုပ်သမား ၈ သန်းကျော်ကို...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ .... ■ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံလုပ်သား ၃၀၀၀ကျော် ဆေးကုသခွင့်ရရှိမယ့် လူမှုဖူလုံရေး- မေမေအထွေထွေရောဂါကု...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ .... ■ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မသန်စွမ်းတွေကို အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတယ်လို့...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ... ■ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးချပြီး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီး...
မင်္ဂလာပါရှင်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ..... ■ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ လိုအပ်နေတဲ့သတင်း ■ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာကို...